Ao anatin'izao hamehana ara-pahasalamana izao, dia naka fanapahan-kevitra ny fitondrana, anampiana ireo mpiasa sahirana misoratra ary mandoa latsakemboka ara-dalàna, heritaona raha kely indrindra, ao amin'ny Cnaps, ny anome vola hindramina, mitovy amin'ny karama raisina iray volana, ary averina mandritra ny 12 volana, manomboka ny 31 janoary 2021.
Inona moa ny atao hoe trosa na crédit?
Ny teny hoe crédit dia avy amin'ny teny latine hoe "credere" na "croire". Izany hoe ny trosa dia vola omena ny olona na orinasa iray mialoha, izay hipetrahan'ny fitokisana fa amerina sy avoaverina ilay vola araky ny hifanarahana, na ny tetiandro, na ny zana-bola tovanana eo amin'ilay renivola.
Raha orinasa no hitrosa, dia na vola entina amokarana, investissement, izay antenaina hiteraka tombom-barotra, na vola entina ampandehanan-draharaha mandram-piditry ny vola mbola tsy voaloan'ny client, avance sur trésorerie.
Raha olon-tsotra no ampindramina vola, dia crédit à la consommation izay no anarany, izany hoe olona iray te hanana bolongam-bola izay tsy azony atao ny mamoaka izay indray mandeha satria tsy ampy ivelomany ny ambim-bolany raha manao izany fandaniana izany izy.
Ohatra, hividy fiarakodia izy, na trano, na andeha vacances, na hanao mariage, na hividy fanaka, na ampiditra zanaka hianatra ka maro ireo vola indray aloa.
Amin'ity tranga ity izany, dia ny antoka ho an'ilay mpampitrosa, banky, dia ny fahazoana antoka fa manana asa maharitra CDI ilay olona, salama tsy atahorana ho faty, tanora taona, raha mbola tsy matoky tsara izy dia ataony antoka ilay zavatra novidiana amin'ilay vola, fiara (gage) na trano, raha mbola atahorany tsy ahaloa ny sarany, dia ampiany antoka hafa, toy ny fananan'ilay olona, na fijoroan'olon-kafa hiditra hiantoka ilay mpitrosa. Matetika 120% n'ilay vola tiana trosaina ny antoka tazonin'ny banky.
Eto izany dia ny fanjakana no hampiasa ny volan'ny Cnaps, izay tahiry ho an'ireo be antitra misotro ronono, sy ny volan-jaza, ary ny karama ho an'ireo mety tratran'ny aretina na loza vokatry ny asa.
Ny fanjakana no niditra mpiantoka eo anivon'ny banky, ary izy ihany koa no andoa ny zana-bolan'ny banky. Tsy fantatra mazava moa ny fifanarahana eo anivon'ny fanjakana, ny Cnaps tompom-bola, ary ny banky mizara ny vola atao trosa.
Ny lalànan'ny trosa dia tsy mahazo mihoatra ny 30% n'ny karaman'olona iray ny vola averiny isam-bolana, ny antony dia tsy azo ekena ny animbinana ny vola entin'ilay olona miaina, anofany trano, sakafo, jirama...
Amin'ny ankapobeny, ny lalàna mifehy ny trosa ihany koa, dia ny trosa lavareny ny fandoavana azy, dia tsy azo hitrosana vola maika ny famerenana azy. (Emprunt long terme ne peut pas être couvert par un emprunt à court terme).
Izany hoe raha nitrosa taman'olona averina 1 taona, nefa tram-pahasahiranana ny famerenana azy, dia tsy azo atao ny mitrosa vola averina 6 volana, anentsenana ny banga amonjena ilay vola tsy voaloa kaoty 12 volana.
Ny antony dia tsotra, ny zana-bolan'ilay trosa 6 volana, dia lafo kokoa noho ilay 12 volana, ary rehefa nanetsina ilay trosa 12 volana ianao izay, dia anenjika anetsina ilay 6 volana kelikely eo, nefa ianao efa tsy misy vola hafa intsony anetsenana an'iny, dia izay ilay hoe dobo-trosa.
Ohatra, nindram-bola amin'ny banky, izay ambany kokoa ny zana-bola, ary lava kokoa ny fotoana amerenana azy, nefa tsy voaloa ny échéance na ilay volana iray, dia naka vola tamin'ny micro-finance, sady fohy ny fotoana amerenana azy, no lafo kokoa ny zana-bola alaina. Fady izay amin'ny findramam-bola. Ny mifamadika amin'izay no azo atao. Ny vola trosa lava sy ambany zana-bola no afaka andoavana trosa fohy sy betsaka zana-bola.
Inona izany no hitranga amin'ireto olona nomena trosa 1 taona ireto.
Zana-bola aloan'ny mpitrosa= 0, fa ny fanjakana no miantoka azy.
Renivola vatakarama 1 volana aloa 12 volana (remboursement différé 4 mois).
Raha nandray karama 400 000ar izy izany, dia omena 400 000ar trosa, ka manomboka 31 janoary dia mamerina 400 000ar/12 = 33 333.33ar isam-bolana, izany hoe 366 666,66 ariary izany sisa ny vola raisiny amin'ny 31 janoary.
Andeha atao hoe tsy voaroaka amin'ny asa izy, mihena 8.33% izany ny fahefa-mividiny, pouvoir d'achat.
Ny vidim-piainana anefa miakatra, ary tombanan'ny teti-bola nasiam-panitsiana ny taona 2020 fa hiaka-bidy 7.20% ny vidin'entana (taux d'inflation). Izany hoe hihena 8.33 + 7.20% =15.53% ny fahefa-mividin'io olona nitrosa io.
Ny fampiakarana karama anefa tsy misy satria ireo mpiasa tsy miankina, privée, no omena io trosa io, fa tsy ny mpiasam-panjakana izay mahazo fampiakara-karama 7% taona lasa izay.
Mety manavotra vetivety tokoa, raha io vola karama 1 volana io, anetsenana ny banga tamin'ny hamehana efa 4 volana izay, fa hidina 15.53% ny fahefa-mividy, mandritra ny 1 taona, amin'ny taona 2021.
Raha ny re teo anivon'ny Cnaps dia vonona ny hanome io vola karama 1volana io ho an'ny mpiasa ny teo anivon'ny Cnaps, fa ny filoham-pirenena, izay mbola namafisiny tamin'ny kabariny, fa tsy omena maimaimpoana io vola io fa averina.